We She Me: Irregardless of
Ko Paw - 8/6/08, 1:03 AM
Worth ကို စင်္ကာပူ တရုတ်တိုင်းက ၀ါ့ဖ် လို့ ထွက်နေတာလည်း ရှိတယ်။
နောက်တခုက အသုံးများသလားတော့မသိ။ ကျနော့် အသိ စင်္ကာပူလူမျိုးတယောက် Relentless effort အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ ရေးချင်တာကို unrelentless effort လို့ မှားရေးထားတာတွေ့လို့ တခါက ထောက်ပြမိတာကို ဟုတ်လို့လား ဆိုပြီး ဒစ်ရှင်နရီမှာ ထရှာတာမျိုး ကြုံရဘူးတယ်ဗျို့။
ဝေတိုး - 8/6/08, 2:29 AM
ိဘာသာစကားဆိုတာက နေရာဒေသအလိုက် ကွာမယ်ထင်တယ်။ ဥပမာ.."ထွန်း" ကို ပုံတောင်ပုံညာဖက်က "ထွင်း" လို့အသံထွက်သလို ပေါ့။
ဒီရောက်စက..စင်္ကာပူမှာတွင်တွင်သုံးတဲ့ "Scold" ဆိုတဲ့word ကဒီမှာသုံးရင်အတော်ရိုင်းသလို word အဖြစ်ရှိသာရှိပြီးမသုးံ ဖို့ သင်ပေးတာကြုံဖူးတယ်။ ဒီမှာအ ဖြူစစ်စစ်ပညာတတ်တွေ She do, they does, he do တွေ informal အဖြစ် သုံးနေတာပါပဲ။
တန်ခူး - 8/6/08, 2:27 PM
ရုံးမှာလဲ အီကြတယ်… ကိုယ်ပါမအီဖြစ်အောင် မနဲသတိထားနေရတယ်… ဒီpostလေးအတွက် ကျေးဇူးပါ ကိုအန်ဒီ…
Anonymous - 8/6/08, 2:31 PM
ဘာသာစကားတွေက စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းတယ်။ မြန်မာစကားပြီးရင်တော့ အင်္ဂလိပ်စကားကို အကြိုက်ဆုံးပဲ။ အင်္ဂလိပ်စာမတော်တဲ့အတွက် ဒီပို့စ်ဝေမျှပေးတာ
ကျေးဇူးပါ။ အသေးစိတ် usage ကို ထပ်ရှာဖတ်လိုက်ဦးမယ်။
Anonymous - 8/6/08, 2:33 PM
အဟင်း ကိုအင်ဒီက ကိုယ်မှားသလိုနဲ့သူများကိုပြင်ပေးတာ။ သိနေတယ်နော်
Aung Myo Htet - 8/6/08, 9:07 PM
အခုမှပဲ ဒီစာလုံးကို ကြားဖူးပါတယ်။ မှတ်သားလောက်ပါပေ့ Singlish
Andy Myint - 8/6/08, 9:49 PM
Negate လုပ်ချင်ရင် တစ်ခုခု ကပ်ရမယ် ဆိုတာက စိတ်ထဲ ရောက်နေလို့ ဖြစ်မှာ ကိုပေါ.. ဒီလောက် ပြောတာတောင် Dictionary ထ ရှာတာတော့ အတော် ရယ်ရတယ်။
ကျွန်တော် (တို့)က Phrasal verb တွေကို ကောင်းကောင်း မသုံးတတ်တာလည်း ပါတယ်။ တကယ်ဆို Scold ကို Tell of လိုမျိုး Vomit ကို Throw up လိုမျိုး သုံးတတ်ရင် ပို အဆင်ပြေမှာနော် မဝေတိုး
ဟုတ်တယ် မတန်ခူး.. သူတို့က သိရက်နဲ့များ `အီ´ နေကြသလားပဲ ခပ်တည်တည်နဲ့
ဟုတ်မှာ အောင်မျိုးထက်.. သြော်ဇီ မှာတော့ တစ်ခါမှ မကြားမိဘူး။ အမေရိကားမှာဆို လူမည်းတွေ ဆီက ကြားရနိုင်သေးတယ်။
Anonymous - 8/10/08, 12:30 AM
One thing amusing in Singapore is the first names, for example, an ex-colleague of mine is
Claire Chu/Wong and when the division CEO (who is alsoalocal guy,amajor in the NS) asked her what is the meaning of her first name, then she was speechless.
Anonymous - 8/10/08, 1:08 PM
Hope you'll haveabetter understanding of how the word comes about.
Andy Myint - 8/10/08, 6:17 PM
Yeah? I have heard some bizarre first name though. And there are few with first name which actually should be last name - such as "Smith".